Wararkii ugu dambeeyay, banaanbixii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay, banaanbixii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyay, banaanbixii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa Sabtidii maanta markale banaanbax isugu soo baxay dadweyne careysan nawaaxiga Isgoyska Jubba ee Magaalada Muqdisho, kadib markii ay ka caroodeen dil xalay loo gaystay laba ruux oo shacab ahaa, waxaana dilkaasi gaystay Askari Boolis ah.
Dadkaan careysan ayaa ku dhawaaqaayay erayo ka dhan ah Ciidamada Dowladda, gaar ahaan Ciidamada Booliska oo ay sheegeen inay yihiin kuwa si bareera u laaya shacabka danyarta ah.
Dadkii xalay ee uu dilay Askariga ka tirsan Ciidamada Booliska, ayaa waxaa la sheegay inay hor fadhiyeen gurigooda, balse lagu gardarooday.
Allaha u naxariistee labada Marxuum ee la dilay ayaa kala ahaa.
1-Marxuumada Madiino Cabdullaahi Cabdi ina Faadumo Xuseen Maxamed 17 jir ah ku dhalatay Xamar daganeyd Boondhere,
2-Marxuun Xasan Cali Cadaawe ina Faadumo Cali Xasan 24 jir ah ku dhashay Xamar daganaa Boondheere.
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay D/Le booliis 26869 Xasan Aadan Xasan 24 jir, kaasi oo hadda ku jira gacanta Hay’addaha Garsoorka dalka.
Askari dilay qof shacab ah
Banaanbax ka dhan ah Ciidamada dowladda